Kedu ihe kpatara ịde blọgụ ji dị mkpa maka azụmaahịa gị | ECommerce ozi ọma
Ihe mere ịde blọgụ ji dị mkpa maka azụmaahịa gị
Ọ bụ ezie na a ka na-arụ ụka ma ịde blọgụ na-aga n'ihu na-aba uru na mgbasa ozi mmekọrịta yana ahịa ahịa, enweghị ajụjụ na ịde blọgụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ịre ahịa ọdịnaya dị n'ịntanetị. N'agbanyeghị ma ị nwere obere azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche, nke a bụ ihe kpatara ịde blọgụ ji dị mkpa maka azụmaahịa gị.
1 Drivegbọ okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị
2 Mee SEO / SERP
3 Wepụta akara dị ka onye ndu na mpaghara ahụ
4 Zụlite ezigbo mmekọrịta gị na ndị ahịa
Drivegbọ okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị
Mgbe ị nwere blọọgụ, ị nwekwara ohere iji mepụta ọdịnaya dị mkpa maka ndị ahịa gị ma ọ bụghị naanị na ị nwere ike ibipụta ọdịnaya na njikọ inbound ozugbo na isiokwu blog, mana ị nwekwara ike iduzi okporo ụzọ gaa na peeji ọdịda ọdịda maka ibe ahụ.
Mee SEO / SERP
Blogde blọgụ na-abawanye SEO nke ibe. Ọhụrụ ọdịnaya ka bụ isi ihe dị n'itinye onwe gị n'ihu asọmpi na nsonaazụ ọchụchọ. Akwadoro ka ị jiri mkpụrụokwu dị n’isiokwu, mee ndepụta na ahịrịokwu niile ma ọ bụ nkebi okwu dị mkpa ma jiri ya na okwu ndị yiri ya mgbe ị na-ede akwụkwọ. Nke a bụ ụzọ dị mkpa maka Google yana igwe nchọgharị ndị ọzọ iji chọta saịtị gị site n'okwu ọchụchọ ndị a.
Wepụta akara dị ka onye ndu na mpaghara ahụ
Gingde blọgụ na-enye gị ohere ịdepụta ederede ederede zuru oke, nke na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ bụ onye ndu na mpaghara ahụ. Site na ịdebanye isiokwu ndị nwere mmetụta na ahịa, enwere ike igosipụta ihe ọmụma, ebe ịre ahịa azụmaahịa, ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa.
Zụlite ezigbo mmekọrịta gị na ndị ahịa
N'ikpeazụ, ekwesịrị ịsị na ịde blọgụ nwere ike ime ka mmekọrịta ndị ahịa kawanye njọ. Mgbe ejikọtara ya na weebụsaịtị, onye ahịa nwere ikike ịmara azụmahịa ma ọ bụ ngwaahịa ahụ, kwuo okwu, aro, dozie obi abụọ ha ma mekọrịta n'ụzọ dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ihe mere ịde blọgụ ji dị mkpa maka azụmaahịa gị
Ahụhụ na saịtị Ecommerce maka ịlaghachi ngwaahịa
Ngwaọrụ mkpanaka na mkpa ha maka Ecommerce